कोरोना त निको भयो, समाजको सोच र दुर्व्यवहारसँग जुध्न भने चर्को छ
कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएपछि म २४ साउनको राति विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नम्बर १९ स्थित बैजनाथपुर स्वास्थ्य चौकीमा संचालन गरेको आइसोलेसन पुगें। त्यहाँ बसेका हामी २० संक्रमितमध्ये १८ जनाको रिपोर्ट ४ भदौमा नेगेटिभ आएपछि हामी होम क्वारेन्टिनमा गयौं।
संक्रमित भएपछि मैले भोगेका कुराबारे हिमालखबर मा ब्लग लेखेको थिएँ। त्यसबारे कतिपयले फोन मार्फत हौसला दिएका थिए। कतिले भने गाली गरे।
विराटनगर ८ का वडाध्यक्ष निश्चल अर्यालले मलाई भाइ सम्झेर आइसोलेसन खाली नभएकाले इटहरी घरमा गएर बस्न भनेका रहेछन्। त्यो कुरा फोनबाट उनले जानकारी दिए। बरु राम्रो आइसोलेसनमा राख्न आफूले नै नगरपालिकामा सिफारिश गरेको उनले बताए। घरबेटीले डेरामा क्वारेन्टिन बसेकी मेरी श्रीमतीलाई ‘आफूहरुले कमल भाइलाई कुनै दबाब नदिएको’ बताएका रहेछन्।
आइसोलेसनमा बस्दा चिकित्सकले बिहान हरेक दिन घाम ताप्ने र व्यायाम गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, मेरो डेराको कोठाबाट यतिका दिन मैले घाम देखेको छैन। घरभित्र छिरेपछि म कोठा र शौचालय बाहेक बाहिरको बरण्डामा पनि गएको छैन। कोरोना संक्रमणको डर मेरा घरबेटीलाई बढी भएकाले घरको मूल गेटसम्म कसैको पनि आउजाउ हुँदैन। मेरो डेराबाट ५ किलोमिटर उत्तर बुद्धचोकमा बस्ने बहिनी अनु बरालले भान्साका लागि आवश्यक पर्ने सामान गेट बाहिरसम्म ल्याइदिन्छिन्। बिहान नजिकैको डेरीका मानिसले दूध ल्याएर गेटमा झुण्ड्याइदिन्छन्।
म डेरामा बसेको विराटनगर महानगर वडा नम्बर ८ का बासिन्दा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेका स्वकीय सचिव राम पोखरेल मलाई भेट्न गेटमा आएका रहेछन्। फोन गरेर बाहिर बोलाए। ‘तपाईंको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अब त अरुसँग परबाट कुरा गर्न मिल्छ, आउनु न’ भनेका थिए। तर मैले ‘क्वारेन्टिनमा छु, अहिले कोठा बाहिर निस्कन सक्दिनँ’ भनिदिएँ।
म आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा बसेको वेला यस टोलका कसैले पनि फोन गरेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राखेनन्। सायद मैले यहाँका मानिससँग मित्रवत् सम्बन्ध राखेको थिइनँ।
आइसोलेसनबाट फर्किएपछि कसैले सात दिन त कसैले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हामी बसेको आइसोलेसनमा नियमित संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्‍ने स्वास्थ्यकर्मी बहिनी शर्मिला निरौलाले मेरी श्रीमतीसँग कुरा हुँदा १४ दिन क्यारेन्टिनमा राख्नु भनेकी रहिछन्। त्यही कुरा मैले सोध्दा उनले ‘एक सातापछि बाहिर जाँदा हुन्छ, तर भीडमा नजानू’ भनिन्।
मैले आदर गर्ने एक जना अग्रज होम आइसोलेसनमै थिए। ९ दिनमा पुनः पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाले उनी परिवारमा मिसिएका छन्। उनले सुनाए, ‘क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ भनेर कसैले भनेन पनि, मैले त परिवारसँग घुलमिल गरिसकेँ।’ बिहान ५ मिनेट पनि हात र जिउ तन्काउन अल्छी गर्ने म अहिले बिहान र बेलुका एक–एक घण्टा व्यायाम गर्ने भएको छु। १२ह्१२ फिट कोठाभित्रका दुई लोबेड बीचको खाली भागमा दौडने, हिंड्ने, उफ्रने र उठबस गर्ने गर्छु। शरीर थाक्छ, खानामा रुची हुन्छ र निद्रा पनि मजाले लाग्छ।
श्रीमतीलाई उपचारका लागि दिल्ली लिएर गएका वेला मलाई डेंगी भएको थियो। उच्च ज्वरोले एक दिन सडकमै बेहोश भएको थिएँ। त्यो अवस्था त पार गरेको थिएँ भने कोरोना मेरा लागि सामान्य होला भन्ने थियो। तर, कोरोनाले मलाई सिकिस्त नै बनाएको थियो।
आइसोलेसनमा बस्दा खाना खान नसकेकाले साथीहरुले मासु पकाएर ल्याइदिन्थे। सञ्जय मण्डलले कुखुराको भाले नै ल्याइदिएका थिए। कटहरी गाउँका साथीहरु मन्टु शेख, मनोज कार्की, इशराफिल शेल र हस्बुल शेख लगायतले लोकल कुखुराको अण्डा खोजेर ल्याइदिएका थिए। त्यसले गर्दा पनि म छिटो तङ्ग्रिएको थिए।
पल्लो कोठामा बसेकी श्रीमती बेलाबेला ‘के ल्याइदिउँ, के खाने ?’ भन्दै सोध्छिन्। मेरो कोठामा भएको थालमा अलग्ग खाना हालिदिन्छिन्। चार पटक पेटको अप्रेशन गरेकी मेरी श्रीमतीले मेरो सेवा गर्नको व्यस्तताले पेट दुखेको थाहा पाउन छाडेकी छन्। रक्तचाप कम भएर वेलावेला रिंगटा लाग्थ्यो, अहिले बिर्सिएकी छन्। क्वारेन्टिनमा बसिरहँदा मेरो साथी भनेको श्रीमती, मोबाइल र ल्यापटप हुन्। श्रीमती पनि जागिरे भएकाले पोषणयुक्त खानामा मलाई समस्या छैन। दिनभरि कमाएर बेलुका खानेका लागि कस्तो समस्या होला ?
तातो पानी नियमित पिउँछु। बेसार, गुर्जो, ज्वानो, प्याज, लसुन, काजु, बदाम नियमित खाँदैछु। क्वारेन्टिनमा बसेका सबैले यसरी नै नियमको पालना गर्ने हो भने कोरोना संक्रमणको असर धेरै दिन शरीरमा नरहला। कतिपयले आइसोलेसनमा आफूलाई बढी ध्यान दिन नसक्दा १२ दिन कटेपछि पनि पुनः रिपोर्ट पोजिटिभ आउने गरेको छ। विराटनगरका आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा १० दिनभन्दा बढी बसेका ११६ जनाको पुनः परीक्षण गर्दा ८ भदौमा ६५ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ।
कोरोना संक्रमित धेरैजसोमा मलाई जस्तै खानेकुराको गन्ध नआउने समस्या देखियो। संक्रमणमुक्त भएपछि त्यस्तो समस्या हटेको बताउने धेरै भेटिए पनि मसँगै निको भएका सञ्चारकर्मी बाबुराम भण्डारीलाई होम क्वारेन्टिननमा बसेको साता बित्दा पनि स्वाद फर्किएको छैन, बास्ना आएको छैन।समाजको बिझाउने सोच
४ भदौ अपराह्न विराटनगरका यातायातकर्मी राजु धमलाले फेसबूकमा फोटो पोष्ट गर्दै आइसोलेसनबाट फर्किएकी एक महिलालाई सम्मान गरेको जानकारी दिएका थिए। खादा लगाएर ती महिलालाई टोलवासीले संक्रमणमुक्त भएकोमा सम्मान गरेका रहेछन्।
एउटा सामान्य कुरा फेसबूकमा पोष्ट गरिएको भए पनि मेरो आँखा रसाए। कोरोना संक्रमित भएपछि मैले भोगेको नराम्रो व्यवहारबारे हिमालखबरमा ब्लग लेखेपछि विराटनगरका राजेश निरौलाले फेसबूकमा मेसेज पठाएर उनको घरमा डेरामा बसेकी एक महिलालाई संक्रमण भए पनि घरमै राखेको जानकारी दिए। घरमा ७८ वर्षीया आमालाई कोठा बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेर ती डेरावाल महिलालाई संक्रमित भए पनि डेरा नछाड्न उनले आग्रह गरेका रहेछन्।
समाजमा यस्ता उदाहरणीय पात्रहरु औंलामा गन्न सकिने मात्रै होलान्। कोरोना संक्रमणको डर मानिसमा छ। यस्तो डर स्वाभाविक पनि हो। तर, संक्रमितलाई नै दुर्व्यवहार हुने गरी भाग्नु चाहिं अशिक्षाकोे परिणाम हो। मसँगै आइसोलेसनबाट फर्किएका संचारकर्मी जितेन्द्र ठाकुर बेलुका डेरामा पुग्दा छिमेकीले ‘टोल नै सखाप हुने भो’ भनेछन्। उनी भोलिपल्टै सप्तरीको हनुमाननगरस्थित घर गए।
उनी घरसँगै जोडिएको गाईगोठमा क्वारेन्टिनमा छन्। कुकुरले ओछ्यानमा पिसाब गरेपछि विराटनगरको डेरा सम्झिएको बताए। “छिमेकीले तल्लो स्तरको व्यवहार गरेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको थिएँ, तर पछि झन् समस्या हुन्छ होला भनेर प्रहरीलाई नआउन भनें’, ठाकुरले फोनमा सुनाए, “सप्तरीबाट फर्किएपछि त्यो टोलबाट डेरा अन्यत्रै सार्छु।”मेरी श्रीमती कार्यरत जहदा गाउँपालिकाको मझारे स्वास्थ्य चौकी भएको बजार लक्ष्मनियामा मलाई संक्रमण भएको विषयमा निकै हल्लीखल्ली भएछ। लक्ष्मनिया युवा क्लबको फेसबूक वालमा ‘स्वास्थ्यकर्मीका श्रीमान् कोरोना संक्रमित छन्, घरमै बसौं सुरक्षित रहौं’ लेखिएको रहेछ। कमेन्टमा एक व्यक्तिले ‘के हो त्यसको नाम’ लेखेछन्। मैले त्यसमा कमेन्ट गर्दै लेखे, ‘केमा पठाइदिऊँ नाम ?’
विराटनगरबाट ८ किलोमिटर परको लक्ष्मनियामा मेरो विषयमा यतिका हल्लीखल्ली भएको छ। मलाई ज्वरो आएको २२ साउनदेखि श्रीमती कार्यालय गएकी छैनन्। तर, त्यहाँका मानिसलाई मेरो नाम चाहिएको रहेछ, सार्वजनिक गर्नका लागि। संक्रमित भएकै कारण दुर्व्यवहार गर्नेलाई सेवा–सुविधा वञ्चित गरिने सूचना स्थानीय तहले तत्काल सार्वजनिक गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले वडा कार्यालयबाट कुनै पनि सिफारिस एक वर्षसम्म नपाउने नियम बनाइए समाजको सोचमा परिवर्तन आउन सक्छ। आइसोलेसनमा बस्दा अर्को कोठामा बस्ने ब्यांकका म्यानेजरका श्रीमती र छोरी संक्रमित भएपछि घरबेटीले दुई दिनसम्म ताला लगाएर भित्र राखी बाहिरबाट आवश्यक वस्तु ल्याइदिएका थिए। आइसोलेसनबाट फर्किएर उनलाई श्रीमती र छोरीको सेवा गर्ने मन थियो। तर, घरबेटीको व्यवहार सम्झिएर उनी होटल क्वारेन्टिनमा छन्। उनीसँगै एउटै कोठामा बसेर कोरोना जितेका एक प्रहरी निरीक्षक पनि समाजले दुर्व्यवहार गर्ने डरले होटलमा गएका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकार कोरोना परीक्षण, संक्रमितको उपचार र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा व्यस्त छन्। यति वेला कोरोनाको डरले लुकेर बसेका समाजमा देखिने बग्रेल्ती सामाजिक संस्थाहरुको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ। कोरोनामुक्त भएकाहरूलाई समाजमा समन्वय गरेर राख्न ती संस्थाहरुले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्।
बढ्दो समस्या र चुनौती
यतिबेला प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरलाई कोरोनाले गाँजेको छ। ६ सयभन्दा बढी संक्रमित घरमै बसेका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकार व्यवस्थापनमै व्यस्त छन्। पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट ५ दिनमा पनि नआउने भएकाले स्वाब दिएका मानिस बजारमा घुमिरहेका भेटिन्छन्।
पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाबको नमूना दिएर तरकारी व्यापारमा लागेका एक व्यक्ति संक्रमित भएको रिपोर्ट आएपछि महानगरले खोजी गर्दा उनी गुद्री बजारमा ठेलामा तरकारी बेचिरहेको अवस्थामा भेटिएका थिए। स्वाब दिएपछि चार दिन कुर्दा पनि रिपोर्ट नआएपछि संचारकर्मी जितेन्द्र ठाकुर सप्तरी घर पुगेर फर्किएपछि मात्रै पोजिटिभ भएको खबर आएको थियो।प्रदेश सरकारले पीसीआर परीक्षणमा परिचालित हुने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढाउन सकेको छैन। प्रयोगशालामा ५ दिनसम्म स्वाब थन्किने अवस्था छ। जनशक्ति थप गरेर २४ सै घण्टा प्रयोगशाला चलाउने हो भने स्वाब दिनासाथै रिपोर्ट आउँछ र संक्रमण फैलिने जोखिम पनि कम हुन्छ।
विराटनगरमा कोरोनाको संक्रमण दर उच्च रहेकाले परीक्षण बढाउन महानगरले मेशिन खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पीसीआर मेशिन खरीदका लागि विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले एक वर्षको पारिश्रमिक जम्मा गरेपछि सहयोग जुट्यो। त्यसमा उद्योगी राजेन्द्र राउतले रु. ७ लाख जम्मा गरेपछि ९ भदौमा मेशिन विराटनगर आइपुगेको छ।
दिनभरि कमाएर बेलुका खाने परिवारमा पनि संक्रमण छ। त्यस्ता मानिसलाई पोषणयुक्त खानेकुरा समुदायले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। समाजसेवीहरुले उनीहरुको उपचारमा पनि सहयोग गर्नु जरुरी छ।प्रदेश सरकारले पीसीआर परीक्षणमा परिचालित हुने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढाउन सकेको छैन। प्रयोगशालामा ५ दिनसम्म स्वाब थन्किने अवस्था छ। जनशक्ति थप गरेर २४ सै घण्टा प्रयोगशाला चलाउने हो भने स्वाब दिनासाथै रिपोर्ट आउँछ र संक्रमण फैलिने जोखिम पनि कम हुन्छ।
दिनभरि कमाएर बेलुका खाने परिवारमा पनि संक्रमण छ। त्यस्ता मानिसलाई पोषणयुक्त खानेकुरा समुदायले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। समाजसेवीहरुले उनीहरुको उपचारमा पनि सहयोग गर्नु जरुरी छ। हिमाल खबरबाट